Dowladda Mareykanka oo cambaareysay xil ka qaadista Guddoomiye Shariif una sheegtay xukoomadda Soomaaliya in ay Mareykanka joojinayaan 40 million oo deeq deg deg ah ay siin lahayd, Qanyare oo ay cabsi la soo deristay kadib markii la laayay qaar ka tirsan ilaaladiisa iyo burcad dad ku laysay jidka u dhexeeya Jowhar iyo Buulo Burte. Ruunkinet 19/01/07
Haweneyda u ah ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Jendai Frazer ayaa sheegtay in xilka qaadidda guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ay tahay mid ka soo horjeedda dimoqraadiyadda iyo dastuurka u qoran dowladda federaalka ah.
Warka ayaa intaasi ku daraya in Ms Frazen warkeeda raacisay in ay dowladda Mareykanka ay si ku meel gaar ah 40 milyan oo ah deeq deg deh ah u siin lahayd dowladda madaxweyne Yuusuf ee ku jirta xaaladda deg deg ah.
Arrintan ayaa waxaa aad uga xumaaday sida la sheegay taageerayaasha madaxweyne Yuusuf iyo kuwa ra'isul wasaare Geeddi oo dhawaan billaabay in ay xaflado u dhigaan ka qaadista xilka ee guddoomiye Shariif Xasan.
Dhanka kale, xildhibaan Maxamed Qanyare Afrax oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaashi ay ka adkaadeen midowga maxaakiimta ayaa la sheegay in ay cabsi la soo deristay kagadaal markii ay laayeen ilaalada madaxweyne Yuusuf qaar ka tirsan ilaaladiisa.
Mudane Qanyare ayaa loo sheegay in uu soo wareejiyo hubkiisa asagoo waliba sida la sheegaya lagu amray in uu muujiyo taageerada uu u hayo dowladda.
Dhinaca kale, Burcad ku sugan gobolka Shabeelada Dhexe ayaa la sheegay in ay ku dileen dad badan oo saarnaa gawaari ay dhacayeen oo marayay jidka aada gobolka Hiiraan.
Burcaddan oo rasaas ku furay dadkii rayidka ahaa ee saarnaa laba gaari oo ay weerareen ayaa la sheegay in ay ku dhinteen ilaa 4 qof qaar kalana ay ku dhaawacmeen.